I-Semalt Islamabad Expert: Indlela yokukhusela i-WP Referrer Spam Kwi-Google Analytics
I-spam yokudlulisela kwi-Google Analytics ibe yinkinga ebalulekileyo. Ngenxa yogumbeko lwe-spam yokuthunyelwa kwiiwebhusayithi ezidala kunye namajelo asekuhlaleni, ii-webmasters ziye zaphazamiseka zizihlunu ezahlukileyo kwaye zisebenzisa ezinye iindlela zokuthintela ukuhamba kwezithuthi ezingekho kumgangatho ongezantsi.
Asikho isidingo sokwesaba njengoko kunokwenzeka ukuvimba ugaxekile we-WordPress wokudlulisela kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics. U-Sohail Sadiq, ingcali ehamba phambili evela kwi-10 (Semalt , utshela apha indlela yokwenza oku ngempumelelo.
Ukuqalisa ngeGoogle Analytics
Ukuba iwebhusayithi yakho ithola iinqwelo zendlela kwaye ubona ezinye izixhumanisi zogaxekile kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics, ungayilahla ezo zixhumanisi njengoko zinokukukhokelela ukuba ucofe kwiiwebhusayithi ezinobungozi. Ukuba awuzange usebenzise i-Google Analytics kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress ngaphambili, kufuneka ufake i-plugin ye-WordPress kwaye udibanise kwi-akhawunti yakho ye-analytics.
I-Google Analytics iyithuluzi eliphawulekayo nelincedo elikuvumela ukuba ubone ukuba iindwendwe zisebenzisana njani namaphepha akho ewebhu. Unokwazi ukujonga ukuba yeyiphi iphepha elisebenzisayo abasebenzisi, unokulandelela ukuchofoza kwiikhonkco zakho kwaye wenze imisebenzi efana nayo.
Yintoni iReferrer Spam?
Ukuba ufuna ukuba isiza sakho siqaphele, qiniseka ukuba ukhiphe ugaxekile logaxekile kwi-site yakho. Abagxeki be-spammers kunye nabahlaseli baxhamla umnqweno wakho kwaye bathumele ii-URL zokudlulisa ngeempendulo ezizenzekelayo ukuya kumawaka ukuya kumawaka amablogi kunye newebhsayithi yonke imihla. Ezi URL zivela kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics kunye nezinye iinkonzo ngaphandle kwexesha. Ukuqwalasela ukuba baya kuphazamisa indawo yewebhusayithi, kufuneka uhlole iindlela zokuzilahla ngokukhawuleza.
Ndihlangabezana njani neReferrer Spam?
Ungasebenzisa i-Sucuri ukubeka iliso kwi-website yezokhuseleko..I-Sucuri ingakhuseli kuphela indawo yakho kwiTrojans kunye ne-malware kodwa ikhubaza ngokukhawuleza ugaxekile. I-Website ye-Sucuri ye-Firewall ingenye ye-WordPress engcono kakhulu ongayisebenzisa ekuqedeni ugaxekile we-referam. Iqela layo lizinikezele kwaye lisebenza nzima, kwaye abathengi banikwa iinkcukacha zendlela amaziko abo aphucula ngayo.
Vimba u-Spam wokudlulisela kwi-WordPress ngePlagin
Enye indlela yokukhusela i-spam yokudlulisa kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress ngokusebenzisa iifowuni ze-WordPress ezahlukeneyo. Ezi zifowuni zinokukhetha ezininzi, kwaye unako ukubenzela ukukhusela ugalelo logalelo. Into yokuqala omele uyenze ukuyikhuphela, ukufaka kunye nokuvula i-plugin echaphazelekayo, kwaye sincoma ukuba usebenzise iplagi ye-SpamReferrerBlock. Xa sele usebenze ngokugcwele, kufuneka uhambe kwiSetingi »IsiHlomelo sokuPhumela umGaqo kunye nokuqwalasela izicwangciso zeplagin ukuze uqalise.
Vimba ama-Ghost Referrals nge-Google Analytics Filters
Unokubamba ugaxekile logalelo kunye nezihlungi zeGoogle Analytics. Ukuba abagaxekile bakuthumela izicelo eziqhubekayo, basenokuba balandele iikhowudi zokulandelela iUA. Basebenzisa le khowudi ukuchonga i-niche kunye nobume bewebhusayithi yakho. Uninzi lwe-webmasters longeza iifayile kwiakhawunti zabo ze-Google Analytics, apho kufaka iifayili ezisolisayo kwaye uzilahle phantsi kwemizuzu. Yiya kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye uye kwiCandelo leNethiwekhi yeTekisi. Apha ufanele ukhethe igama lomninimzi njengento ebalulekileyo kwaye uzama ukwandisa iziphumo kwiNyanga yeNyanga. Amanye amagama e-domain kufuneka uyifake apha yi-wpbeginner.com, darodar.com, nabanye.
Unokukhusela ugaxekile logalelo olufanayo kunye nezihlungi zeGoogle Analytics. Hamba kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye uvimba ii-URL njengamaqhosha-for-website.com, blackhatworth.com, darodar.com, kunye ne-anticrawler.org Source .